71 Qof Oo Xukun Maxkamaddeed Ku Dhacay, Olole Ciidamada Amaanku Ku Qaadeen Tuugta Iyo Wasiirka Arrimaha Guddaha Oo Ka Hadlay Gudiyadii Nabadgelyada Ee Xukuumaddu Laashay | Araweelo News Network (Archive) -
71 Qof Oo Xukun Maxkamaddeed Ku Dhacay, Olole Ciidamada Amaanku Ku Qaadeen Tuugta Iyo Wasiirka Arrimaha Guddaha Oo Ka Hadlay Gudiyadii Nabadgelyada Ee Xukuumaddu Laashay
Hargeysa(ANN)Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, ayaa sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan tuugta iyo dadka ka ganacsada khamriga oo uu tilmaamay inay u qaateen inaanu dalka sharci ka jirin markii la laalay Guddidii nabadgelyada ee ka baxsanayd
Garsoorka sharciga ah.
Wasiirku wuxuu sidaasi ka sheegay maanta oo uu ka hadlayay ka dib markii Maxkamadda Gobolku ay min laba sanadood oo xadhig ah ku riday 71 ka mid ah dadka khamriga ka ganacsada.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka hadlay halkaasi wuxuu yidhi “Waxaad ogtihiin dalkeenna inay Nabadgelyadu tahay waxa ugu weyn ee hanti ah ee aynu haysano. Nabaddaasi oo shacbigu uu yahay qeybta libaax ee ilaashata ee gacanta birta ah ku haysata iyo Ha’yadaha amniga oo iyaguna aan hadh iyo habeen aan seexanin. Taasi waxay keentay in doorashooyin si wanaagsan u dhacay ay dalka ka hirgalaan. Waxay keentay doorashadaasi in madaxdii caalamku ay ku soo qul qulayaan dalkeenna. Laakiin Nabaddaasi cadow bay leedahay, wada jirku cadow buu leeyahay, Nabadda habeenkii lagu seexanayaa cadow bayn leedahay. Waxa cadowgaasi ka mid ah tuugta oo saqda dhexe dadka gidaarada ku dhacaya oo wadooyinka ku qabsanaya oo waliba aan u naxayne’e tooridda hore ka galinaya intaanu wixii uu ka rabay aanu ka qaadin. Tuugtaasi waxay ka faa’iidaysteen Guddidii Nabadgelyada gobolada ee ka baxsanaa garsoorka markii meesha laga saaray ayay u qaateen inaanu dalku sharci lahayn lagu qabto ka wax dilaya iyo ka wax xadaya. Waxa kale oo iyaguna ka faa’iidaystay dhaqan xumo faro badan waxaad arkaysaan waxa hortiina jirikaano iyo quraarado khamri ah buuxa ee la soo qabtay.”
“Waxa maanta la xukumay tuugtii magaalada dhibtay ee caanka ahaa,ma aha in xukun deg deg ah lagu sameynayo ee caadi ayaa loo xukumay waxaana ka wada shaqaynaya sidii dadkaasi gacanta loogu soo dhigi lahaa Ha’yaddihii xukuumiga ahaa, sida Wasaaradda arrimaha Guddaha, Cadaaladda, Diinta iyo awqaafta, Booliska iyo Asluubta.waxaan doonaynaa inaan shacbiga tusno togan khamriga ah ee wadada qul qulaya”ayuu yidhi Dr. Gaboose.
Wasiirku daakhiligu wuxuu sheegay in khamrigaa iyo tuugta lasoo qab qabtay ay ku timi dedaal xad dhaaf ah oo ay sameeyeen ciidanka Booliska Somaliland.
Wasiirka Wasaarada Diinta iyo Aw-qaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo isaguna ka hadlay halkaa ayaa ka waramay sida Ilaahay u xaaraantinimeeyay khamriga iyo dhaqan xumadda. Waxaanu ciidanka booliska ku bogaadiyay dedaalka ay ku soo qabqabteen qaar ka mid ah dadka ka ganacsatada khamriga oo uu ku tilmaamay Hooyadda xumaanta.
Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Gen. Cilmi Rooble Furre, oo ka hadlay arrintaa ayaa yidhi “Waxa hortiina yaala 2566 iyo nus khamri ah xaddigaasi khamriga ahi wuxuu geli lahaa caloosha reer Hargeysa oo qudha. Ubaxkeenii iyo diinteeniina halkaasi ayay ku dhammaan lahaayeen, waxaan ammaan balaadhan u soo jeedinayaa Wasiirrada arrimaha gudaha iyo diinta iyo awqaafta.waxa kale oo aan bogaadinayaa Maxkamaddaha sidii ay ahayd u fuliyay ee xukumay dadkii waxan lagu soo qabtay illaa saaka waxa la xukumay 71qof oo min laba sanadood oo xadhig ah lagu xukumay. Waxaan leeyahay kuwa dibada jooga ee khamriga ka ganacsada in la qabanayo oo ciqaab adag la marsiinayo.”
Dhinaca kale Ciidanka Bilayska iyo gudida wanaagfarista ayaa wada olole lagu qabqabanayo dhalinyarada xaafadaha iyo suuqa dadka ku baadhta habeenkii oo mudooyinkii u danbeeyay soo kordhayay iyo sidoo kale Tuugta oo iyaguna fara baas ku haya dadka.